खेलकुद – PostKathmandu
सन्दीपले जर्सी पाएपछि दिल्लीमा चर्चा, दिल्लीले यस्तो लेख्यो ट्वीटरमा
काठमाडौं: आइपिएल टिम दिल्ली डेयरडेभिल्सले सन्दीप लामिछानेलाई १ नम्बरको जर्सी दिएको छ। काठमाडौंको अन्नपूर्ण होटलमा आयोजित कार्यक्रममा दिल्ली डेयर डेभिल्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) हेमन्त दुवाले सन्दीपलाई जर्सी हस्तान्तरण गरेका हुन्। सन्दीपको रोजाइ २५ नम्बरको जर्सी भए पनि त्यो अरु खेलाडीले नै लिइसकेकाले उनले १ नम्बरको जर्सी रोजेका हुन्। सन्दीपले नेपालबाट २५ नम्बरकै जर्सी लगाएर खेल्ने गरेका छन्। उनले २५ नम्बर जर्सी रोज्नुको कारण भने अलि पृथक रहेको बताए। उनले कार्यक्रममा भने, ‘मेरो भान्जीको जन्म मिति २५ गते हो, मान्जी अहिले यो संसारमा छैनन्। उनलाई सम्झिन म सधैं २५ नम्बरलाई रोजाइमा राख्नेगर्छु।’ उनले थपे, ‘२५ नम्बर जर्सी नपाएपछि मैले १ नम्बर जर्सी रोजेको हुँ, यसको मतलब म सधैं १ नम्बर बन्ने कोसिसमा रहन्छु।’ दिल्लीले सन्दीपलाई जर्सी हस्तान्तरण गरेपछि दिल्ली डेयरडेभिल्सले आधिकार
नेता, मन्त्री, ठूलाठूला कर्मचारीहरुलाई करोड करोड को गाडी, देशको नाम र शान बढाउने खेलाडीलाई भारतले #भिख मा दिएको बस !
विश्वकप क्रिकेट छनोट प्रतियोगिताबाट एकदिवसीय मान्यता प्राप्त गरेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीलाई सोमबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भव्य स्वागत गरिएको छ । नेपाली टोलीलाई नवनियुक्त खेलकुदमन्त्री जगत विश्वकर्माले विमानस्थलमै पुगेर स्वागत गरेका छन् । यसैगरी, विमानस्थलमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य–सचिव केशवकुमार विष्टलगायत सयौँ समर्थकले टोलीको स्वागत गरेका थिए । राष्ट्रिय टोलीका कप्तान पारस खड्काले क्रिकेट इतिहासमै ठूलो सफलता हात पार्दा आफूहरू भावविभोर भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘हामीले नेपाली क्रिकेटको इतिहासमा अहिलेसम्मकै ठूलो सफलता हात पार्‍यौँ, यो क्षणमा हामी भावुक भएका छौँ,’ पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै पारसले भने, ‘हामीलाई थप दबाब बढेको छ ।’ नेपाललाई एकदिवसीय मान्यता प्रदान गराउन खेलाडीलाई निखारेका मुख्य प्रशिक्षक जगत टमाटाले प्राप्त उपलब्धि रक्षा गर्नुपर्ने च
जताततै नेपालको चर्चा, दिल्ली मख्ख आइसीसी छक्क
काठमाडौं: नेपाली क्रिकेटले अहिलेसम्मकै ठूलो सफलता हात पारेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आइसिसी) ले प्रदान गर्ने एकदिवसिय मान्यता नेपालले बिहीबार प्राप्त गरेको हो। जिम्बावेमा भइरहेको आइसिसी एकदिवसीय विश्वकप छनोटको प्ले अफमा पिपुवा न्यूगिनीलाई ६ विकेटले पराजित गरेसँगै नेपाल एकदिवसीय मान्यता नजिक पुगेको थियो। अर्को प्लेअफमा नेदरल्यान्ड्सले हङकङलाई ४४ रनले पराजित गरेपछि नेपालको एकदिवसीय मान्यता पक्का भएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा प्रवेश गरेको २२ वर्षपछि नेपालले प्राप्त गरेको यो सबैभन्दा ठूलो सफलता हो। सन् २०१० मा डिभिजन–५ मा रहेको नेपालले ८ वर्षको अन्तरमा ठूलो फड्को मारेको हो। आइसिसीले लेखेको फेसबुक पोस्ट जिम्बावेमा भइरहेको छनोटमा सहभागि एसोसिट ६ मध्ये ४ टिमलाई सन् २०२२ सम्मका लागि एकदिवसीय मान्यता दिने आइसिसीले निर्णय गरेको हो। डब्लुसिएल च्याम्पियनसिपको विजेताल
Mar132018 by PostKathmanduNo Comments
२ घण्टा देखि छोराको पर्खाइमा थिए अब छोरा रहेन संसारमा हे भगवान कसैलाई पनि एस्तो नहोस सबैले रिप लेखि शेयर गर्दिनुहोला
२ घण्टा देखि छोराको पर्खाइमा थिए अब छोरा रहेन संसारमा हे भगवान कसैलाई पनि एस्तो नहोस सबैले रिप लेखि शेयर गर्दिनुहोला मर्नु सबैले पर्छ तर येस्तो मरन कसैको नहोस् लास त आयो ,तर छोराछोरीको सास आएन त्यसपछि कहिले मिठो आभास आएन, परदेशमै बित्यो जिन्दगी खुशि किन्दाकिन्दै तर जब आफ्नो भुमिमा आए , भगवानको साथ पाएन त्रिभुवन विमानस्थलमा भएको विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनु हुने सबैमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली र घाइतेहरुलाइ शिघ्र लाभको कामना आउनु सबै मिलेर प्रार्थना गरौ, जति जानू भयो उहाहरुको आत्मा मुक्ति होस् र जति अचेत अवस्थामा हुनुहुन्छ ,उहाहरुको स्वास्थ सुधारको खबर छिट्टै सुन्न पाउ यो पनि पढ्नुहोस् : यूएस बंगलाको विमान दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या ५० जना पुगेको छ । ढाकाबाट काठमाडौं आएको विमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दुर्घटना भएको हो । दुर्घटना स्थलमा ४६ जनाको मृत्यु भएको
Mar122018 by PostKathmanduNo Comments
विश्वकप छनोट ताजा अपडेट: नेपाललाई तेस्रो सफलता, सन्दिप लामिछानेले लिए महत्वर्पूण विकेट
काठमाडौं । विश्वकप क्रिकेट छनोट अन्तर्गत हङकङसँगको खेलमा टस हारेर फिल्डिङ गरेको नेपालका सन्दिप लामिछानेले हङकङको महत्वपूर्ण विकेट लिएका छन् । उनले अनसुमन रतको विकेट लिएका हुन् । यसअघि नेपालका सोमपाल कामीले हङकङको अति महत्वपूर्ण विकेट लिएका िथए । १६ बलमा ३ चौका र १ छक्कासहित २० रन बनाएका हङकङका बाबर हायतलाई सोमपालले आउट गराएका हुन् । यसअघि बसन्त रेग्मिले पहिलो विकेट लिएका थिए । हङकङका ओननिङ ब्याट्सम्यान सी कार्टरलाई उनले ९ रनमा आउट गरेका थिए । काठमाडौं । विश्वकप क्रिकेट छनोट अन्तर्गत हङकङसँगको खेलमा टस हारेर फिल्डिङ गरेको नेपालका सन्दिप लामिछानेले हङकङको महत्वपूर्ण विकेट लिएका छन् । उनले अनसुमन रतको विकेट लिएका हुन् । यसअघि नेपालका सोमपाल कामीले हङकङको अति महत्वपूर्ण विकेट लिएका िथए । १६ बलमा ३ चौका र १ छक्कासहित २० रन बनाएका हङकङका बाबर हायतलाई सोमपालले आउट गराएका हुन्
चीनमा सम्पन्न माउन्ट गोवालिगोङ अल्ट्रा (टीएचटी) ५५ किलोमिटर म्याराथनमा नेपालकी सुनमाया बुढा प्रथम भएकी छन् । विभिन्न राष्ट्रका दुई सय ९३ जना धावकको सहभागिता रहेको उक्त म्याराथनमा उनी महिला समूहतर्फ पहिलो भएकी हुन् । उनले ५५ किलोमिटरको निर्धारित दूरी पाँच घन्टा ४४ मिनेट १९ सेकेन्डमा पूरा गरिन् । अल्ट्रा म्याराथन नेपाली समयअनुसार शुक्रबार बिहान सुरु भएको थियो । म्याराथन वेनझी गुवाङ चाङ स्क्वायरबाट सुरु भई हेसुन ऐन्सेट टाउनमा पुगेर सकिएको थियो । प्रतियोगितामा निर्धारित दूरी सात घन्टा दुई मिनेट ४२ सेकेन्डमा पूरा गर्दै अमेरिकाकी मेरिडिथ एडवार्डस् दोस्रो र सात घन्टा ३६ मिनेट ४२ सेकेन्डमा दूरी पार गर्दै चीनकी च्याङ पिङ फ्याङ तेस्रो भए । सुनमाया जुम्लाको पातारासी गाउँपालिका पेरेकी हुन् । उनले कर्णाली स्पोर्टस् क्लबमा आबद्ध भई प्रशिक्षण लिँदै आएकी छन् । क्लबका अध्यक्ष सरोज शाहीका अनुसार चीनमा
Mar42018 by PostKathmanduNo Comments
विश्वकप छनोटः जिम्बाब्वे विरुद्ध नेपाल जवाफी ब्याटिङमा (लाईभ)
विश्वकप छनोटः जिम्बाब्वे विरुद्ध नेपाल जवाफी ब्याटिङमा (लाईभ) काठमाडौं । विश्वकप छनोटको पहिलो खेलमा नेपाल अहिले जवाफी व्याटिङ गरिरहेको छ । जिम्बाब्वेबाट ३ सय ८१ रनको लक्ष्य पाएको नेपालले पहिलो विकेट गुमाएको छ । पहिलो विकेटका रुपमा नेपालले दिलिप नाथलाई गुमाएको हो । नेपालले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो लक्ष्य पाएको छ । सन् २००९ बाट सुरु भएको विश्वकप छनोटमा कुनै पनि टोलीले पाएको सबैभन्दा ठूलो लक्ष्य हो । २००९ मा यूएईले डेनमार्कविरुद्ध ३८९ रन बनाएको थियो । यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको जिम्बाब्वेले ५० ओभरमा ६ विकेट गुमाएर ३८० रन बनायो । उसका लागि ब्रेन्डन डेलर र सिकन्दर राजाले शतक हानेका थिए । लाइभ हेर्न याे लिंकमा क्लिक गर्नुहाेस्: यो पनि पद्नुहोस निसन्तानको लागि सन्तान जन्माउने र वरबघु जुराउन नसकेको लागि मिलाईदिने अलौकिन स्थान ! जानकारी लिनुहोस>> महादेव मन्दिर नुव
आयो गोर्खाली LIVE नेपाल र जिम्बाबे बीच को लाइब क्रिकेट खेल हेर्नुहोस भिडिओ सहित जिम्बाबे को ४ विकेट गयो
आयो गोर्खाली LIVE नेपाल र जिम्बाबे बीच को लाइब क्रिकेट खेल हेर्नुहोस भिडिओ सहित जिम्बाबे को ४ विकेट गयो यो पनि पद्नुहोस निसन्तानको लागि सन्तान जन्माउने र वरबघु जुराउन नसकेको लागि मिलाईदिने अलौकिन स्थान ! जानकारी लिनुहोस>> महादेव मन्दिर नुवाकोट जिल्ला को राउतबेसी गाविसमा अवस्थित धार्मिक पर्यटकीय स्थल हो । विशेषगरी जोडी जुराउन र सन्तान माग्नकै लागी यस स्थानमा भक्तजनहरु दुप्चेश्वर महादेव पुग्ने गर्दछन् । सदरमुकाम विदुरदेखि पूर्वमा रहेको राउतवेंशी गाविसको दुप्चेश्वर महादेवको मन्दिरमा यस्तो आस्था बोकेर जाने भक्तजनको आकर्षणले पछिल्लो समयमा सांस्कृतिक तथा धार्मिक महत्वलाई उजागर समेत गरिरहेको छ । हरेक वर्षको पुस महिनामा धान्यपूर्णिमाका अवसरमा साताव्यापी विषेश मेला, शिवरात्री, साउन महिना तथा हरेक सोमबार दुप्चेश्वर मन्दिरमा मेला लाग्ने गर्दछ । यहाँ मुख्यतः सन्तान नहुने दम्पतिहरु
नेपाली क्रीकेट इतिहासकै पहिलो रेकर्ड आयो खुशिको खबर पढदै सेयर गरौ।
२० फागुन, काठमाडौं । विश्वकप क्रिकेट छनोटमा जिम्बाब्वेविरुद्ध बलिङ गरिरहेको नेपालले १ विकेट लिएको छ । आठौं ओभरको पहिलो बलमा नेपालका लागि सन्दिप लामिछानेले विकेट लिएका हुन् । १० ओभरको खेल सकिदा जिम्बाब्वेले १ विकेट गुमाएर ८७ रन जोडेको छ । जिम्बाब्वेविरुद्धको खेलमा नेपालका ललितनारायण राजवंशीले डेब्यू गरेका छन् । विश्वकप क्रिकेट छनोटमा जिम्बाब्वेविरुद्ध बलिङ गरिरहेको नेपालले १ विकेट लिएको छ । आठौं ओभरको पहिलो बलमा नेपालका लागि सन्दिप लामिछानेले विकेट लिएका हुन् । १० ओभरको खेल सकिदा जिम्बाब्वेले १ विकेट गुमाएर ८७ रन जोडेको छ । जिम्बाब्वेविरुद्धको खेलमा नेपालका ललितनारायण राजवंशीले डेब्यू गरेका छन् । भर्खरै बसन्त रेग्मीले पनि जिम्बाबेको १ विकेट झारेका छन् !! अर्को समाचार पनि पद्नुहोस यी हुन् गोप्य अङ्गमा ट्याटु खोप्ने ७ नेपाली नायिका (भिडियो) यी हुन् नेपाली चर्चित नायिका जसले गोप्य
Mar22018 by PostKathmanduNo Comments
सोमपाल कामीले नेपालको नाक राख्दै यसरी बनाए बिश्व रेकर्ड, सम्मान स्वरुप सक्दो सेयर गरौं
सोमपाल कामीले नेपालको नाक राख्दै यसरी बनाए बिश्व रेकर्ड, सम्मान स्वरुप सक्दो सेयर गरौं बंगलादेश टि-२० बिश्वकप २०१४ पछि नेपाल पहिलो पटक हंगकंगसंग आफ्नो चौथो अन्तरास्ट्रिय टि-२० खेल्दै थियो । बिश्वकपमा हंगकंगलाई ८० रनको बिशाल अन्तरले पराजित गरेको नेपालले उस्तै प्रदर्शन दोहोर्याउने आशा सबैले गरेका थिए। तर, पि सारा ओभलमा टस हारेको नेपालले निकै कमजोर सुरुवात गर्यो। एक पछि अर्को विकेट लगातार गुमाएको नेपालले पहिलो ८ विकेट २५ रनमै हंगकंगलाई सुम्पन पुग्यो। लज्जास्पद ब्याटिंग गरेको नेपाल टि-२० अन्तरास्ट्रिय क्रिकेट इतिहासकै सबैभन्दा कम स्कोरमा समेटिने खतरा बढ्न थाल्यो। बंगलादेश बिश्वकप २०१४ मा नेदरल्याण्डले श्रीलंकासंगको खेलमा मात्रै ३९ रन बनाउन सकेको थियो जुन योगफल भन्दा पनि कम योगफलमा नेपाल समेटिने सम्भावना प्रबल देखिन थाल्यो। पारस खड्का , ज्ञानेन्द्र मल्ल , सुबास खकुरेल जस्ता ठुला नामहरु